१२ खर्ब खर्चेर बनायो चीनले विश्वकै ठूलो एयरपोर्ट, शानदार सहित बनाएको यो एयरपोर्टको यस्तो छ विशेषता ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) | DON Nepal १२ खर्ब खर्चेर बनायो चीनले विश्वकै ठूलो एयरपोर्ट, शानदार सहित बनाएको यो एयरपोर्टको यस्तो छ विशेषता ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) – DON Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय १२ खर्ब खर्चेर बनायो चीनले विश्वकै ठूलो एयरपोर्ट, शानदार सहित बनाएको यो एयरपोर्टको यस्तो छ विशेषता ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
१२ खर्ब खर्चेर बनायो चीनले विश्वकै ठूलो एयरपोर्ट, शानदार सहित बनाएको यो एयरपोर्टको यस्तो छ विशेषता ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
By Don NepalMar 20, 2018, 19:24 pm0
अद्भूत भौतिक संरचना र प्राविधिक रुपान्तरणका लागि कहलिएको राष्ट्र हो चीन । त्यहाँका सडक र ट्राफिक नियन्त्रण संरचना कति शानदार छन् भन्ने उल्लेख गरिरहनु नपर्ला ।
यसै महिना चीनले हवाई प्रदुषण नियन्त्रण गर्नका लागि ५ सय ५३ वटा कार ब्रान्डहरुलाई प्रतिवन्ध लगायो । केही दिन अगाडि मात्र उनीहरुले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एयर प्युरिफायर निर्माण गरे ।
चीनले अहिले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ, जसले ठूलै हंगामा मच्चाइरहेको छ ।
यो विमानस्थलको विकास २०१४ को डिसेम्बरमा भएको थियो र परीक्षण सञ्चालन सन् २०१९ को अक्टोबरबाट गरिनेछ । तर सञ्चालनमा नआउँदै यो विमानस्थल विश्वभर चर्चित बनिसकेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हुने विश्वास गरिएको बेइजिङमा रहेको दाक्सिङ एयरपोर्टको लागत ८० अर्ब यूआन अर्थात् १२ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर छ ।
सिन्ह्वाका अनुसार यो विमानस्थल ३ लाख १३ हजार स्क्यायर मिटरमा फैलिएको छ । एयरपोर्टको टर्मिनल भवनमा चारवटा रन वेहरु हुनेछन् ।
यसले एक वर्षमा १० करोड यात्रु र ४० लाख टन कार्गो सहित ६ लाख २० हजार वटा उडान गराउन सक्नेछ ।
यसअघि रहेको विमानस्थल बढि भिडभाड भएपछि नयाँ विमानस्थलको खाँचो परेको हो । यसबाट यात्रुहरुले ठूलो राहत पाउनेछन् ।
विमानस्थलका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । मानिसहरुले यसलाई साइन्स फिक्सन चलचित्रहरुमा देखिने विमानस्थलहरुसँग तुलना गरिरहेका छन् ।
लन्डन — बेलायतमा पहिलो पटक आयोजित ‘मिसेस नेपाल यूके २०१७’ मा सेकेन्ड रनर अप भएपछि अचेल अमृता गिरी गजुरेलको चिनारी फेरिएको छ । अब गृहिणीमात्र छैनन् उनी । बेलायतका विभिन्न स्टेजमा नाच देखाइरहेकी हुन्छिन् उनी । प्रेरणादायी मन्तव्य, नाटक अनि गायन पनि निरन्तर ।
गत साता नेपालका मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिकाको सहयोगार्थ लन्डनमा एउटा च्यारिटी डिनर गर्न उनको गहन जिम्मेवारी रह्यो । आयोजक मिसेस नेपाल यूके टिमले उक्त कार्यक्रमबाट संकलित करिब दश लाख रुपैयाँ छिट्टै नेपाल पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
अमृता अन्य आम महिला भन्दा कसरी फरक छिन् भने उनको एउटा हात छैन् । तर, उनी २०० माइलसम्म निरन्तर मोटर वेमा कार हाँक्छिन् । गृहिणी पनि भएकाले घरायसी सबै काम, दुई सन्तानको रेखदेख अनि परिवारिक दायित्व समेत निभाउँछिन् ।
सारी देखि अरु लुगा लगाउन उनलाई कसैको सहारा जरुरत छैन् । मेकअप आफैं गर्छिन् । कुकिङ गरेर साथी भाइ, पाहुना निम्त्याइरहने त उनको रुची । अचेल प्राय कार्यक्रममा उनको नाच डिमाण्ड हुन्छ । गीत गाउंछिन् उनी ।
हालै ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लुम्ले सहभागी लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित नारी दिवसमा उनको नाच आकर्षणको केन्द्र बन्यो । ‘मेरो एउटा हात छैन् तर अठोट, हिम्मत र साहस छ’, एक मध्यान्ह लन्डनमा गफिंदै थिइन् उनी, ‘अपांगहरुमाझ म बेग्लै परिचय बनाउन चाहन्छु । उनीहरुको प्रेरणा श्रोत बन्न चाहन्छु ।’
मामाघर गएर रमाइलो गर्ने त्यो उत्साह । उमेर केवल ९ वर्ष थियो । निजगढ नेर उनी चढेको बस दुर्घटना भयो र बसले च्यापिएर एउटा हात चुँडियो । बीरगन्ज हुँदै काठमाडौं बी एण्ड बी हस्पिटलमा चार महिना उपचारपछि उनी घर फर्किइन् ।
जिन्दगीभर अपांगता हुनुको पीडा आफूसँग त छँदै थियो, त्यसमाथि समाजले हेय दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो । उनकी आमा अम्बिका गिरीलाई समेत ‘डुंडी’ अमृताकी आमा भनेर खिसी गर्थे कोही । केही पारिवारिक सदस्यले नै उनलाई तिरस्कृत गरे । दुर्घटनापछि उनले आफ्नो कपाल केटाको जस्तै काटिन् ।
‘सुरुका दिनमा त आत्महत्या नै गरौं कि जस्तो हुन्थ्यो,’ अमृता विगत सम्झिन्छिन्, ‘साथीहरुले जिस्क्याउलान भनेर दुई तीन महिना त स्कुल पनि गइन । म आफ्नो अनुहार ऐनामा कहिल्यै हेर्थिन ।’ तर, आफ्नो पारिवारिक साथले अमृताले हरेस खाइनन् । उनी घर सिन्धुपाल्चोकको सट्टा काठमाडौं होस्टेलमा पढ्न थालिन् । अल्बर्ट आइन्सटाइन स्कुल थियो ।
जेठी छोरीको एकाएक फेरिएको रुपले बाबु आमा चिन्तित नहुने कुरै भएन । आमाले छोरीलाई कहिल्यै कमजोर हुन दिइनन् । उनका बाबु सेतु गिरी पेशाले सेफ, उनी लन्डनमा थिए । बाबुकै कारण सन् २००६ मा अमृता लन्डन आइन् ।
लन्डन आएपछि नेपाली समाजको तिरस्कार त झेल्नु परेन तर आफ्नो लागि केही गर्ने दृढता उनले लिइरहिन् । आत्मबल पनि बढ्यो । लन्डनग्रीनफोर्ड हाइ स्कुलबाट जिसिएसइ पास गरिन् ।
स्कुलमा उनको विषय नाटक र गायन थियो । ए लेभलमा हेल्थ एण्ड सोसियल र ब्याचलर्समा मनोविज्ञान पढिन् । ब्याचलर्स पढ्दा पढ्दै सन् २०१० मा प्रेम बिवाह भयो शंकर गजुरेलसँग । श्रीमान र परिवारको साथले उनलाई अगाडि बढ्न हौसला मिलिरहेको छ । अमृतालाई मिसेस नेपालकै विजेताहरु गिता बस्नेत पाण्डे र प्रिमा भट्टराईले हरेक पाइलामा साथ दिएका छन् ।
लन्डनमा शारिरीक रुपमा फरक क्षमता भएका (डिसेबल) लाई खुब सम्मान हुने अमृता बताउंछिन् । अलाउन्स, बेनिफिट, केयर टेकर आदि उपलव्ध हुन्छ सरकारबाट । ब्लु ब्याजले पार्किङ जहां पनि निशुल्क । तर, उनले सरकारबाट बेनिफिट नलिएको बताइन् । ‘बेनिफिट लिए मलाई झन् कमजोर महशुस गराउंछ’, उनले भनिन्, ‘आफैं केही गरौं जस्तो लाग्छ ।’
अमृता भविष्यमा आफू जस्ता अपांगहरुको हितका लागि केही गर्ने सोचमा छिन् । ‘अपांगता रहरले हुने होइन,’ उनी भावुक भइन्, ‘परिस्थितिले त्यस्तो भएपछि समाज र परिवारले सम्मान दिए हामी हरेक क्षेत्रमा सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न सक्छौं ।’
छिट्टै गीत रेकर्ड गर्ने योजनामा छिन् अमृता । समयले साथ दिए स्काई डाइभिङ गर्ने उनको सपना छ ।
(साभार : साझा नेपाल)
Previous Postनपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेको यहि हो : जब खानेपानी मन्त्री बिना मगर मेलम्ची पुगिन्, मोजमस्तीमा बसेका आयोजकको उड्यो होसहवासै, मन्त्री बिनाको कडाईका कारण जनताले छिट्टै पानी प्रशस्त पाउने ! (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) Next Postप्रहरी के का लागी ? हेर्नुहोस दरबारमार्गमा एक महिला माथी उडि उडि लात्ती प्रहार गरे, त्यो पनि प्रहरीको एक समुहले नै ! (भिडियो)